Bisikileta tsara ve i Cannondale Synaps? - Cannondale
Tena > Cannondale > Cannondale synaps black inc - vahaolana azo ampiasaina
Cannondale synaps black inc - vahaolana azo ampiasaina
Bisikileta tsara ve i Cannondale Synaps?
nyCannondale Synaps105 Isny tsara indrindra2,625 $BisikiletaAfaka mividy ianao. Ho tianao ny mitaingina, ary ny vidiny ambany. Ilay entina: nySynapsdia ny lalana faharetanabisikiletaho an'ny olona maniry làlana malama sy milaminabisikiletaizany koa dia misy ny sasany amin'ireo snap sy pop an'ny maodely hazakazaka.
Hey ry zalahy, ity dia Peter avy amin'ny bisikileta sy fiainana. Eto izahay izao mba hijery ny Cannondale Synaps, saingy misy lanezy be eto fotsiny noho izay noheverinay fa azontsika rehefa nivoaka avy teto isika. Na dia izany aza, dia handeha haka bisikileta mahafinaritra isika ary hiresaka momba izany kely.
Lasa izao. Cannondale dia namboarina ka ny Synaps dia fanambadiana, haitao haitao, ary fampiononana mahitsy ka matoky tena ianao, mahatoky tena, mampihena ny fiasan'ny fefy ary mampihena ny hovitrovitra izay mifamatotra amin'ny arabe ny kodiaranao. Izy ireo angamba no fampiatoana amin'ny fiara mihazakazaka Formula 1 izay mifanaraka tsara mba hahazoana antoka fa marina ny fikirakirana.
Ka na dia ny synaps amin'ny ankapobeny dia bisikileta am-pitoniana sy somary milamina kokoa. Raha mila miadana ny pedal ianao dia manana henjana be amin'ny endriny hahatratrarana izany. Ny iray amin'ireo fomba hahatratrarana izany dia ny fampiasana ny fonosana Power Pyramid ambany, ny fizarana Power Pyramid ary ny seza mivantana ao amin'ny fonosana ambany ary mampitombo ny hamafin'ny torsional an'ity ambany ity.
Isaky ny mandeha an-tongotra ianao dia tadiavinao ny hamafan'ny farany ambany mba tsy hiondrika hitondra hery bebe kokoa amin'ny arabe. Rehefa miverina manaraka ilay frame aho dia misy fiovana goavana amin'ny endriny manerana ny synaps ary avy eo dia tonga amiko milamina kokoa ilay frame. Antsoin'izy ireo ho toy ny fihenam-bidy izy io, ary ny fihenam-bidy dia tokony hanome anao mihena kely hovitrovitra ary fampiatoana kely, ho an'ny fikirakirana izay mampitombo ny fahafahan'ny bisikileta hiady amin'ny tany mikitoantoana, ny hady, mitaingina loto ary mora manamboatra bisikileta mahazo aina kokoa amin'ny ankapobeny.
Izy ireo dia manana ny fivezivezena tariby anaty mahafinaritra miaraka amin'ny tariby elektronika. Fantatr'izy ireo fa tsy tena mahita tariby amin'ity bisikileta ity ianao afa-tsy ny valin-drakitra kapila. Izy ireo aza dia mihazakazaka mivantana ny tariby hydraulic amin'ny alàlan'ny tongotra fork sy amin'ny rotor.
Ka ny Cannondale Synaps dia mampiasa Synomet Endurance Road Geometry, izay midika fa manana fantsom-bolo lehibe kokoa ianao eto izay mitondra ny tohanan-tànana ary miakatra ny soroka ary miverina ao an-tsainao indray ianao ary manantena ny hipetraka amin'ny fifandanjana tsara eo anelanelan'ny haingon-trano hazakazaka sy geometry mahitsy mampiorina. Ity no karazana bisikileta voalohany novidiko. Ny anton'izany dia nandeha bisikileta vy somary milamina foana aho, toy ny bisikilon'ny raiko tany Univega tamin'ny taona 1980. sanda ara-pihetseham-po lehibe toy izany amiko.
Nandeha an-jatony kilaometatra aho taloha satria tena liana tamin'ny fitsangatsanganana lavitra. Rehefa te hampitombo ny zava-bitako aho dia nijery ny géometry faharetana satria manambatra ny fahombiazan'ny fefy karbonika miaraka amin'ny fahatsapana milamina avy amin'ny bisikiletako taloha. Fantatrao fa bisikileta ity izay azoko atao tsara mitaingina am-polony mandritra ny ora maro, izay misy karazana bisikileta hafa rehetra nitaingenako somary mahery setra loatra ho ahy, somary lalina loatra eto ary fantatrao fa tsy izany no izy Naniry aho.
Nahazo fampiononana aho nandritra ny tontolo andro, efa avy nizaha, nandehandeha aho ary fantatrao fotsiny hoe ho aiza no hitondra ilay bisikileta. Ka eto koa ny Cannondale Synapse Carbon Ultegra di2 miaraka amin'ny frein disc dia mandeha lavitra na bisikileta amin'ny hazakazaka, na te-hamely ny tara sy ny hazakazaka tianao hamelezana ny vatokely ianao, hijerena ny tontolo andro, hifalifaly, hampionona betsaka Hery bisikileta tsara be daholo. Ka hey, raha te hahita lahatsoratra misimisy momba ny bisikileta amin'ny fifaninanana ianao dia azonao atao ny manindry eto raha hijery ny lisitry ny playlist bisikileta.
mampitombo ny herin'ny bisikileta
Azonao atao ny mijery lahatsoratra amin'ny bisikileta rehetra mihodinkodina rehetra izay mahery setra sy maivana kokoa, izany ilay TCR Advanced Pro One. Tsindrio eto raha hijery ilay lahatsoratra ary mazava ho azy fa antenaiko fa mankafy an'ity lahatsoratra ity ianao hisoratra anarana ary hahazo fanavaozana mandeha ho azy isaky ny mampakatra lahatsoratra vaovao ianao. Tsindrio eto raha hisoratra anarana na eto ambany.
Ka hey misaotra betsaka, mivoaha any ary mitondra fiara alohan'ny hitsonika ny lanezy na aorian'izay tianao. Misaotra anao anefa, mitandrema ary mifalia ..
Azonao atao ve ny mihazakazaka amin'ny Cannondale Synaps?
nyCannondale Synapsdiairayamin'ireo bisikileta miaritra izanyianareoAzafady noho ny hadisoana disohazakazakabisikileta. Ny mifangaro no tanjona hatrizayhazakazaka-ny fahombiazana sy ny géometry miaraka amin'ny fampiononana tadiavintsika rehetra amin'ireo mitaingina faharetana maharitra ireo.10. 2017.
Karazana bisikileta inona ny Cannondale Synaps?
Carbon Synaps ve ny Cannondale?
nySynapsdia lalanabisikiletamaivana izany, henjana, haingana ary mahazo aina. Ho lava kokoa ny dianao. Tsy ho hitanao izany.
Marika tsara ve i Cannondale?
MoaCannondalebisikiletatsara? Eny,Cannondalebisikileta no tenatsara. Tsy maninona na ohatrinona ny vola laninao, dia hahazo bisikileta voaangona tsara ianao izay namboarina haharitra. Mazava ho azy fa vola bebe kokoa no hahazoanaotsara kokoaspecs, fa na ny fidirana ambaratongaCannondaleny maodely dia mahomby raha ampiasain'ny mpihaino kendreny.11.05.2021
Azonao atao ve ny mamadika ny Cannondale Synaps ho gravel?
nyCannondale SynapsCarbon Disc SE 105 Men's 2019Bisikileta vatokelymaka fenitraCannondale Synapsary henan'ombyvatokelymitaingina. Ny fenitraSynapsdia natao ho an'ny mitaingina be amin'ny sisin'ny lalana rehetra. Milina fiaretana marina; nybisikiletafaafakamitaingina lasantsy feno mandritra ny andro feno.
Mety ho bisikileta iray ve ny Cannondale Synaps?
Inona no bisikileta Cannondale tsara indrindra?
Ny Synaps dia iray amin'nyCannondale'slàlana fiaretana malaza indrindrabisikiletahoan'nytsaraantony Ny Synaps dia tenabisikileta tsaraizay miaraka amin'ny frame karbaona na aliminioma ary azo alaina amin'ny fananganana tsy manam-paharoa 60! Abisikiletaizany dia azon'ny amateurs sy ny matihanina mandeha.11 2021.
Cannondale Synaps 105 bisikileta iray?
nyCannondale SynapsCarbon Disc SE1052019 ny lehilahyBisikileta vatokelymaka fenitraCannondale Synapsary henan'ombyvatokelymitaingina. Ny fenitraSynapsdia natao ho an'ny mitaingina be amin'ny sisin'ny lalana rehetra. Milina fiaretana marina; nybisikiletaafaka mitaingina lasantsy feno mandritra ny andro tontolo.
32mm ve ampy hanaovana vatokely?
Ny sakany sy ny manitsaka
Raha ny ankamaroan'ny dia dia eo amin'ny tara miaraka amin'ny vitsivitsyvatokelysehatra, mikendry zavatra eo anelanelan'ny 28-32mm. Raha miresaka 50/50 isikavatokely-to-tara, eo anelanelan'ny 32-36mm dia toa mandeha tsara ho antsika. Izay rehetra maro an'isavatokely, 36mm ary miakatra no ho tapakila.04.05.2021
Ohatrinona ny vidin'ny Synn Black Cannondale?
Ny maodelin'ny halo ao amin'ilay faritra dia ity, ilay black-on-black £ 6.999,99 Hi-Mod Black Inc, izay mampiasa ny fantsona mitovy amin'ireo maodely ambany saingy namboarina tamin'ny fibre carbon-modulus avo lenta an'ny Ballnec an'ny Cannondale. Ny karbaona dia novolavolaina ho an'ny fitaovam-piadiana mahery vaika ka lafo be.
Iza no maodely tsara indrindra an'ny synn Cannondale?
Ny maodely ambony indrindra ao amin'ny Cannondale's Synaps dia ny Hi-Mod Black Inc. miavaka ara-panatanjahantena izy io: maivana, malama, mora mitaingina, miaraka amin'ny sisin'ny hazakazaka. Nalefa tamin'ny làlam-bato goavam-be ao amin'ny Tuscany's Strada Bianche, bisikileta afaka miatrika ny karazana tarmac rehetra io.
Iza no bisikileta tsara indrindra any Cannondale azo vidiana?
Azo lazaina fa ny bisikileta farany indrindra, ny Cannondale Synaps Hi-Mod Disc Black Inc. Road Bike 2016 dia manasongadina haitao sy haitao izay miantoka fampiononana maharitra miaraka amin'ireo fitaovana ampiasaina mba hampifangaroana tsara ny fampisehoana sy ny fihoaram-pefy mampihena ny fampiononana.